Booliiska kenya oo sheegay cidii isku dayda in ay dib u dhistaan goobihii ganacsi ee laga dumiyay in lagu xukumayo lixbilood oo xarig ah.
CANAB MAXAMUD C/LLE (MUMTAZ)
Habeenimadii arbacada ayay ku waabariisten ganacsato badan goobohoodii ganacsi oo la burburiyay dhacna loo gaystay,kadib markii ay booliiska kenya sida ay sheegeen amar lagu siiyaya in ay burburiyaan goobahaan ganacsi oo sida ay dawladdaa kenya sheegtay ah kuwo ku yaal goobo sharci daro ah oo aan loogu talagalin suuq.
suuqyadan oo ku yaalay wadada geesaheeda waxaa ku qasaaray oo ay hantidoodu ku luntay ganacsato soomaaliyeed,sida ay igu waran Dahabo Cali oo ku lahayd dukaan lagu iibiyo mopile-lada, kabo iyo bagaash kale oo aysan waxba ka caynsan hantideedi oo ku dhawayd qiyastii sida ay ii sheegtay illaa 4000$ (afar kun oo doolar).
Dadkan ganacsatada ah waxaaa dhacaday tuugo markii ay booliisku wadeen hawlgaladii ay ku burburinayeen suuqyadan boosaska ay daganaayeen ganacsatada ayay ku gadeen lacag adag sida uu sheegay wiil ganacsade ah oo lagu magacaabo c/casiis maantana layskugu daray dhac dhul ay gadeen iyo hantidii u taalayba. ganacsatdan ayaa ku cabanaya inaan la siinin wax digniin ah ka hor intaan la soo weerarin,balse mid ka mid ah booliiska kenya oo aan wax ka wediiy arintan ayaa ii sheegay in loo digay mudo laba todobaad ka hor ah,ayna ka guuri waayeen taasna ay keentay in ay igu qasab kula dagaalaan.
Keniyaay Maxaad Tahay.......
Warbixintii Assad Caddaani Ibraahim Isxabaal Febraayo 2002
dadkan looma hayo meelo ay dagaan waxayna jogaan goobihii laga saaray waxaana ka muuqata naxdin ay ku reebtay dhibaatadii ku dhacday.iyagoo ka rajo qaba in ay dib u dhistaan,balse booliiska kenya ayaa uga digay in cidii dhisata ay la kulmi doonto xarig mudo lixbilood ah.